I-Didier Drogba Ibali leNtshukumo yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts
ikhaya AMANQAKU E-FOOTBALL AFRIKA Abadlali beBhola eKhatywayo base-Ivory Coast I-Didier Drogba Ibali leNtshukumo yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts
AMANQAKU E-FOOTBALL AFRIKA
I-LB ibonisa ibali elipheleleyo legendla yebhola ye-football kunye ne-Akhawunti eyaziwa ngokuba yiSiqhwala "Tito". I-Didier Drogba Yomntwana Ibali Le-Untold Biography Iinkcukacha ziquka i-akhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela kwiminyaka yobuntwana kuze kube yimini. Uhlalutyo lubandakanya iProfayili, ibali lobomi phambi kobuqili, ubomi bentsapho kunye nokubaninzi kunye nokugxininisa amaqiniso amancinane.
UDidier Drogba uyamhlonela izigidi zebalandeli bebhola kwihlabathi lonke. Abaninzi abalandeli abanokufa babona uDidier Drogba njengomdla webhola webhola kuphela onqwenela, onamandla kunetalente kaLionel Messi noConaldo. Qala uqale ngomxholo oyintloko wale nqaku.
Iindaba zeDidier Didier Childhood Plus I-Untold Biography Facts-Obomi bakwangoko
UDidier Drogba ebusana
Okubizwa ngokuthi 'iTito' elithetha 'iGiant'. UDidier Drogba wazalelwa ngegama elipheleleyo uDidier Yves Drogba Tebbily ngoMashi 11, 1978. Yena wazalwa eAbidjan, eCôte d'Ivoire. Ukuza kwakhe kweli hlabathi kwenzelwe ngababhanki ababini base-Ivorian abathandana nabo phakathi kwe-1970.
UDidier Drogba kwimihla yakhe yobutsha wakhulela kwidolophana yasekuhlaleni apho kwakukhona imeko yokuphila enzima. Ubomi bakhe bokuqala babona indlala eninzi eyayihlupha yena kunye nosapho. Le meko yezoqoqosho yenza amawaka ama-Ivoriya abalekela ilizwe lawo ukuze atyule eFransi. IFransi ngelo xesha yabonakala njengendawo yokubalekela abafuduka baseIvory.
UDidier Drogba ngethuba lokukhula kwakhe wayexhamle ngokutya okungondlekiyo okunciphisa ukukhula ngokomzimba nangokwengqondo. Abazali bakhe (uAlbert noCloldelde Drogba) bajamelana nemisebenzi yabo yebhanki yendawo eyayingenakukutya ukutya kwitheyibhile. Kwaye, ithemba elilodwa kuphela lokulinda iimali ezithembisa isiqhelo saseFransi kunye nebhola lebhola (Michel Goba). UMichel Goba wayephakathi kweqela lokuqala labafuduki ababalekele eFransi ngenxa yobunzima belizwe lase-Ivory Coast. Iimali ezilindeleke kuye ziza kukunceda uhambo lukaDidier oluya eFransi olucetywayo nakwiminyaka yobudala be-5.
Umalume kaDidier Drogba 'uMichel Goba' wayeyaziwa ngokuba sele eFrance emva kokuba ebalekele ilizwe lakhe. Wahlala njengomdlali webhola lebhola ekhatywayo ephantsi.Stade Brestois 29 '. Ngaloo xesha, iFransi yayithatha abadlali abaninzi bebhola.
Micheal Goba (Uncle Didier Drogba)
Ngaphandle kokuthumela imali, kwakukho nethemba lokuba uMichel Goba (uMalume waseDrogba) uza kufika e-Ivory coast, atyelele uDidier emva koko, amthabathe waya eFransi. Wena, leli themba lancinci njengoko iFransi yalahla uMichel Goba i-visa ukutyelela i-Ivory Coast.
Oku kuye kwashiya ukhetho olulodwa lokuthunyelwa kwemali eyayinakho ukukwazi ukubonelela ukulungiselela i-visa kumntu oyedwa. Emva kwengxoxo enkulu yentsapho, kwagqitywa ukuba uDidier omncinane kufuneka ahambe yedwa eFransi.
Ukuhamba kwedwa kwakusasaza uDidier. Kwakuyihambo engaqhelekanga kwinkwenkwana encinane engabonanga okanye ingena kwiindiza ubomi bakhe bonke. Esikrwimini ngexesha lokuhamba kwakhe, abazali bakaDidier babeka ileyile enkulu entanyeni yakhe ngelizwi; 'UDIDIER DROGBA WOKUBHUMANA MICHEL GOBA EPARIS'. Ngokufanelekileyo, eli taki yenza wonke umntu kwi-Airport ukuba amkhangele ngokumangalisa kuye, ngaloo ndlela ebuza ukuba abazali bakhe babenomdla kangakanani ekumxosheni ngaphandle kweli lizwe.
UDidier Drogba xa efika eFransi ekhuselekileyo wadibana noMalume wakhe owayemlindele ngokukhawuleza kwi-Airport yeCharles de Gaulle.
Ukufika kukaDidier Drogba kokuqala eFransi kwiminyaka eyi-5
I-Didier Drogba Ibali leNtshukumo yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts-DI-Start Start to Life eFransi.
Kwiinyanga ezimbalwa emva kokuba uDidier Drogba eFransi, abazali bakhe e-Ivory Coast benza isigqibo. Babenombono wokuthi unyana wabo kufuneka agxininise ngokupheleleyo kwiimfundo kwaye angabi ngumdlali webhola njengoko umalume wakhe enza. Nangona kunjalo, izimvo zeGoba zahlukile. Wayefuna ukuba uDidier abe ngumdlali webhola webhola njengalowo. UMichel Goba wenza ukuba usayine uDidier osemncinci kwisikolo sebhola eFransi.
UDidier Drogba kwi-Football Academy (i-6 yobudala)
Ngezihlandlo eziliqela, abazali bakaGoba noDidier bavumelani ekunqumeni ikusasa lomfana omncinci. Nangona kunjalo, isisombululo senziwe ekupheleni. Kwavunyelwene ukuba uDidier Drogba adibanise ibhola lezemidlalo kunye nabafundi. UDidier Drogba kwafuneka aphume kwinqanaba lebhola lebhola kwaye wabhalwa ngokusemthethweni kwiqela lakhe lebhola lebhola.
Kule nqanaba, kwakukho ithuba lokuxuba zombini izifundo nokudlala ibhola lebhola.
Emva kokuphanga okufutshane eFransi, uDidier Drogba ngokukhawuleza waba ngumngcipheko ehlala nomalume wakhe. Ngokufanelekileyo, wakhulela ekhaya kungekudala emva kokufika kwakhe eFransi.
Xa usandul 'uxoxwe ngokutsha malunga nale nto, uDidier Drogba wayenjenje oku kuthetha; ...
Ndiyakhumbula ubomi bam kwasekuqaleni eFransi. Ndakhala rhoqo imihla. Akunjalo kuba ndiseFransi - ndandingabikho ndawo - kodwa ngenxa yokuba ndide kude, kude nabazali bam. Ndaziphosa kakhulu.
UDidier Drogba wanyamezela iminyaka emithathu ngaphambi kokuyeka eFransi esemncane. Wayexelele umalume wakhe ngesibindi ngesifiso sakhe sokubuyela e-Ivory Coast ukuba abe nabazali bakhe. Emva kokuqwalasela ukuba akayi kulwa nalo, umalume kaDidier wamnxanela ngesifiso. Wakhupha i-monie waza wabuyela endizeni. Le nto yabona uDidier Drogba ebuyela ekhaya ukuba abe nabazali bakhe eAbidjan.
I-Didier Drogba Ibali leNtshukumo yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts-Ukushiya iFransi ye-Afrika
Ngelishwa, u-Didier Drogba ubuyele ezweni lakubo eneminyaka eyi-8 akazange ahambe kakuhle. I-Ivory Coast yayisesigxina sokuwa kwezoqoqosho njengoko ngexesha lokubuya kwakhe. Le meko yafika kwinqanaba abazali bakhe abanakho ukuhlawula imali yokuhlawulwa yesikolo. Oku kwaphumela ekubeni uDidier wayemisa imfundo yakhe. Ngesinye isikhathi, uDidier Drogba waqala ukudlala ibhola ekwizinga lendawo. Waqala ukuya kwimibala yebhola yebhola ukuze aqeqeshe nabahlobo. Oku wakwenza iminyaka emithathu de ube ngu 11.
Ngeminyaka eyi-11, abazali bakaDidier Drogba baphulukana nemisebenzi yabo. Ngeli xesha, ukushisa kwexesha lexesha lezoqoqosho lase-Ivory Coast akusekho isilevu.
Ngokuzithemba ngokuvumela ukuba unyana wabo ashiye eFransi, abazali bakaDidier Drogba bahlaziye ngokunyanisekileyo eMichel Goba kwakhona ukuze bancede. UDidier Drogba ngenye indlela wavuma impazamo yokushiya iFransi. Ngenhlanhla kuye, uMalume uMichel Goba waphendula waza wathumela imali kuDidier Drogba ukuba eze okwesibili eFransi.
I-Didier Drogba Ibali leNtshukumo yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts-Eyesibini ezayo eFransi
Eyesibini ezayo eFransi, uMalume uMogba uGbaba wayehlonipha umnqweno womzali wakhe ukuba aqhubeke nokuqhuba izifundo zakhe. UGoba wanquma ukubeka uDidier Drogba esikolweni. Wayemfundisa i-antics efunekayo kwibhola lebhola. Ngenxa yeziphumo zemfundo, uDidier wagcina ibhola yebhola kwinqanaba lolutsha apho edlala khona. Umalume wakhe uGoba Goba uxhumelele kwiqela lebhola lebhola le-'Levallois SP 'kwi1993. Wayenomsebenzi ekwenzeni umsebenzi wephepha lebhola likaDidier Drogba njengoko kuboniswe ngezantsi.
Umsebenzi wePhepha leBhola ekhatywayo kaDidier Drogba (Ubudala be-14) I-Didier Drogba yebhola yebhola ekhatywayo eLe Mans
UDidier Drogba ngeli xesha wagxininisa kwibhola lexesha elide ngelixa efunda esikolweni esiphakeme. Emva kokufunda esikolweni esiphakeme, waqhubela phambili ukulandela iSigqibo kwi-Aukufikelela kwiYunivesithi yaseMaine. Ngelo xesha, wadibanisa imfundo yakhe nebhola eLe Mans.
UDidier Drogba wayenomdla wokugqiba i-akhawunti yakhe ngaphambi kokuba athathe ibhola lexesha elipheleleyo.
I-Didier Drogba Ibali leNtshukumo yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts-I-Accountant Chartered Accountant
UDidier Drogba akazange afune ukuba ngumdlali webhola yecalucala de kube yenziwa ngezemfundo. Ngokufanelekileyo, uDidier Drogba ufumana iSigqibo seMali kwi-21. Namhlanje ibharenti ebhalisiweyo.
UDidier Drogba: I-Akhawunti yeCreditary Certified Certified
Ngeminyaka eyi-21 emva kwe-degree degree accounting, uDidier wanquma ukugxila ngokupheleleyo kwibhola. Okokuqala wayesebenzisa amandla okudlala indima yokuhlasela. Oku kwambona ekuguqula phambili phambili endaweni yokubuya. Ngelo xesha, kwakukho abadlali abaninzi abanet talente ngaphezu kwakhe. Babenet talente ecocekileyo. Wena, umnqweno kaDidier Drogba unamandla kunetalente.
Umsebenzi wakhe onzima wamenza wadluliselwa eGuingamp kwi-2002, apho wancedisa khona iqela ukuba liphephe ukuxhomekeka kwisiqendu sesibini. Le ngxowa yamnceda ukuba idluliselwe eMarseille kwixesha le-2003-04, apho yafumana khona iinjongo ze-19 kwimidlalo ye-35 ukuphumelela umdlali weFrench Xigx 1 wonyaka. Emva kokuba afinyelele umqhubi wakhe wezemidlalo, i-26 eneminyaka engama-20 yayijoliswe kwiinkampani ezininzi zaseYurophu, kwaye iBelllin ihlawulise imali yokudlulisa imali eyi-36 yezigidi zeenkonzo zayo kwi-2004. Eminye imbali!
I-Didier Drogba Ibali leNtshukumo yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts-Inkxaso Yabazali Abafanelekayo Yemidlalo Yebhola
UDidier Drogba uyathandwa kakhulu kwaye uxhaswa ngumama wakhe, uClotilde Drogba noyise, u-Albert Drogba. Ngelishwa, abazange bamxhase ukuba ahambe kwibhola ukusuka ekuqaleni. Drogba, uhloniphe umnqweno wabo ngokufumana iSigqibo se-Akhawunti kwaye, ubonakalise ukuba bangalunganga. Ubenze bakholwe ukuba ibhola lebhola liyakwenza ukuba kube yimpumelelo enjengoko sele iyenze. Namhlanje, bafumana iziphumo zempumelelo yakhe. Akukho mntu uva kakhulu kuMichel Goba kule mihla.
Abazali bakaDidier Drogba
I-Didier Drogba Ibali leNtshukumo yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts-Ininzi yebhola lebhola lebhola laseAfrika
UDidier Drogba uthandwe yi-Afrika yonke ukususela ekubeni wenza ukubonakala kwakhe kwehlabathi lokuqala kwiqela le-Ivory Coast kwi-2002. Kwiimidlalo ezininzi zebhola zebhola, uDidier Drogba ngumdlali webhola laseAfrika obalaseleyo. Ndiyabulela ku-Chelsea FC '. Uthiwa ngumdlali webhola le-Afrika lomnyaka kabini (2006 kunye ne-2009). Wayephethe uxanduva lokubamba iqela lakhe lesizwe, elibizwa ngegama "Iindlovu," kukhuphiswano lweNdebe yeHlabathi kwixesha lokuqala kwi-2006, kwaye kwakhona kwi-2010. Nangona iindlovu zahluleka ukuqhubela phambili isigaba seqela zombini amaxesha. Ukubonakala kwabo kwintlalo enkulu yebhola lebhola ekhatywayo bavuyiswa ngabalandeli abazinikezele bevela e-Afrika.
I-Didier Drogba Ibali leNtshukumo yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts-Ukuyeka iMfazwe Yomphakathi
UDidier Drogba udla ngokubaUmkhosi woxolo ngabaontanga kunye nabalandeli. Ukukwazi kwakhe ukuguqula ilizwe lakhe abantu ekumiseni into eya kuthiwa yi-CIVIL WAR ngokungathandabuzekiyo yenza ukuba kuthiwe 'Abantu be100 banempembelelo kakhulu kwihlabathi' yi-Time Magazine. Njengomntu owaziwayo kakhulu kwilizwe lakhe, uye wasebenzisa ukuma kwakhe ngeenjongo ezilungileyo xa ilizwe lakhe lisebuncineni bemfazwe yombutho.
Oku kwenzeka ngokwenene;
Njengoko i-Ivory Coast yonakaliswe yimfazwe yombutho e-2006, uDidier Drogba wayekhokelela kwiNdlovu ekuthandazeni uxolo emva koMdlalo weNdebe yoMhlaba. Waqhubeka uququzelele inkcazo yeqela elibiza ukuba iphelile kwimfazwe. Le migudu yaxhaswa ekuncediseni ukuphelisa umlilo phakathi kwamaqela axhobileyo kwilizwe.
Le ntshukumo yazisa uxolo ngokukhawuleza kuzo zonke iinkokheli zenkcubeko ezixhatshaziwe kwilizwe lakhe. Ekugqibeleni, imfazwe emva koMkhosi eya kuthatha ubomi bewaka yachithwa.
I-Didier Drogba Ibali leNtshukumo yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts-Ukucula iNdlela yaseAfrika
Nangona ehlala ubomi bakhe kwilizwe lamazwe aseYurophu, akalokothi atyeke kwiinkcubeko zaseAfrika. Oku kuquka ukucula umculo wakhe welizwe elifanelekileyo njengengoma enyanzelekileyo xa uxelelwa ukuba ahlabelele ekufikeni kwiklabhu entsha.
I-Didier Drogba Ibali leNtshukumo yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts-Umtsalane ku-Chelsea FC Umlobi weNtombi
KuDidier Drogba, ukuzonwabisa kukuzonwabisa. Ukukhenkceza malunga naloo ntatheli ye-Chelsea yebhinqa yayingeyintsha kubalandeli. Wena, akayekanga ukuthetha kakuhle.
I-Didier Drogba Ibali leNtshukumo yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts-Ukusebenzisana neMicrosoft System
Ngaphambi kweNdebe yeHlabathi yokuqala, iqela lase-Ivory Coast lenze irekhoda kunye neMicrosoft System Local Band. Lapha, uDidier Drogba wabonisa ukuba uyakwazi ukucula kunye nokudlala ibhola.
I-Didier Drogba Ibali leNtshukumo yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts-INtloko yeSizwe yeNkokheli
Umlingani weqela likazwelonke likaDidier Drogba uyazi ukuba kuhlanganisani. Ubume babo buyingqayizivele kwaye abukwazi ukuthelekiswa namanye amaqela e-Afrika. Bacinga kunye kunye benze njengabazalwana bokwenene. UDidier Drogba obonakala ngokuqhelekileyo njengenkosi uhlala ephakathi kwimiba yonke.
I-Didier Drogba Ibali leNtshukumo yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts-Udliwano-ndlebe noThierry Henry
Yiva oko uDidier Drogba athetha ngokukhula ukudlala ibhola kunye namava akhe adlala e-Afrika. Jonga ngezantsi;
I-Didier Drogba Ibali leNtshukumo yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts-Ingxaki yeBlack Bucket
UDidier Drogba uyathanda inselelo yebhakethi yeqhokho. Uyakwenza oko ukukhuthaza iminikelo yocwaningo kunye nokwazisa 'isifo se-amyotrophic lateral sclerosis'. Jonga Ngezantsi;
I-Didier Drogba Ibali leNtshukumo yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts-Omama Omkhulu Opheka Iikomiti Zikazwelonke
Umama kaDidier Drogba ukhangeleka kakhulu 'Osemncinci kunye Omkhulu'. Unina waseCote d'Ivoire ngamazwe uhola iqela labasetyhini abapheka iqela likazwelonke kunye nabalandeli babo.
UCloldelde Drogba uyakuthanda ukwenza ukupheka kwekhaya lomzimba weembotyi, isobho sepilisi, irayisi emhlophe kunye ne-stew. Ngokutsho kwakhe, 'Ndiyathanda ukufaka isandla kwilizwe lam ngokubondla bobabini abalandeli beqela kunye nabadlali ngaphandle kwentlawulo. Ukutya kwam kunika abaxhasayo amandla okunyanzela iqela lethu kukuphumelela '.
Yonke imini yomdlalo, amakhulu amaxhasi abancinci ahamba kunye neebhotile ezingenanto zokuqokelela ukutya ngaphandle kwentlawulo evela kumama womdlali wase-Ivorian onamandla kakhulu, ngaphambi kokuya kwindawo yokuma ukucula nokubetha.
I-Didier Drogba Ibali leNtshukumo yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts-Umdla wokuvutha
Nangona udibaniselwano, uDidier Drogba naye unokuhlambalaza. Le vidiyo engezansi ibonisa umzuzwana elahlekile. Njengoko uDidier Drogba ebeka, "Oku kunokwenzeka kuphela xa unomvakalelo wam okanye iqela lam likhohliswa".
Uthe wachaza umnwe usompempe uTom Henning Ovrebo emva kweNgcaciso yeMidlalo yaseBrazil. Ukugquma oku njengoko kuchazwe ngezantsi kubonisa ukuba uDidier Drogba uyahlanya.
I-Didier Drogba Ibali leNtshukumo yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts-Ukuxazulula Ingxaki Yentsapho Yomhlobo
Uye wacebisa waza wamnceda umngani wakhe waseTogolese u-Emmanuel Adebayor 'wasombulula intsapho yakhe.
I-Didier Drogba Ibali leNtshukumo yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts-Kufunda i Guitar.
UChris Cohen ufundisa uDidier indlela yokusebenzisa i-Guitar aze adlale ingoma yakhe ukuze abalandeli bahlabelele ngexesha lomdlalo, baze bethande kunye naye ehlathini. Jonga Ngezantsi;
I-Didier Drogba Ibali leNtshukumo yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts-Ubomi bothando
Ewe, uhamba ngaphantsi kwezinto abantu abazilindeleyo, uDidier Drogba wahlala kwintombazana evela kwisizwe sakhe saseCôte d'Ivoire. Okwangoku watshata noDiakité Lalla, umfazi waseMaliya adibana naye eParis, kwaye isibini sinabantwana abathathu kunye.
Ngezantsi umfanekiso wesiganeko somtshato waseDidier Drogba owenziwe eAbidjan.
I-Didier Drogba Ibali leNtshukumo yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts-The Kids
Ngezantsi u-Isaac Drogba (unyana kaDidier wokuqala) kunye no-Iman Drogba (Intombi yokuqala noDidier kuphela). UIsake Drogba udlalele iBellen Under 14s. Indodana yakhe endala, u-Isaac, wazalelwa eFransi ngo-1999, kodwa wakhulela eNgilani waza wadlala kwi-system academy ye-Chelsea.
UDidier Drogba unomntwana wokugqibela ogama linguKieran Drogba. Wazalelwa kwi2010.
I-Didier Drogba Ibali leNtshukumo yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts-Ulwalamano noIsake Drogba
UDidier uyakuthanda ngokwenene ukubhiyozela unyana wakhe. UIsake (okhethwe ngentla) okwangoku uneminyaka eyi-17 ubudala ngexesha lokubhala eli nqaku. Unyana kaDidier Drogba uIsake ufuna ukulandela ezinyathelweni zikayise e-Chelsea kodwa uceba ukumela iNgilani kungekhona iCyria Coast. Wada wambamba iFransi.
I-Didier Drogba Ibali leNtshukumo yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts-Ukuchitha ixesha kunye neentsapho
Didier Drogba Uthanda ukuthatha umfazi kunye nabantwana bakhe ngeeholide ehambo lwakhe. Udumo webhola lebhola liye labonwa kwiTekhthi yezemidlalo ephethe umfanekiso kaMike Tyson ngaphesheya phambili njengoko wayekulolunye usuku e-St Tropez kunye usapho.
I-Didier Drogba Ibali leNtshukumo yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts-Ukuthandana namaRumors noRihanna
UDidier Drogba uye wabonwa ephanga kunye kunye noRihanna. Oku kwakungemva kweNtshontsho yeChampions League.
I-Didier Drogba Ibali leNtshukumo yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts-Umdlali weBhola oDlala.
Ewe, uDidier Drogba wayelungele ukuhlala, alwe aze afe ngenxa yeCentral FC. Uyi-Chelsea Legend yangena imvula, iza ilanga. Siza kuwe omnye wakheYifa nzimaumzuzu.
I-Didier Drogba Ibali leNtshukumo yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts-Ubudlelwane noFrank Lampard
UDidier Drogba usoloko ebonisa uthando lwakhe ngoFrank Lampard. Ngezihlandlo eziqhelekileyo, ngokuyininzi kwimibhiyozo, uyayenza umkhuba oqhelekileyo wokucula 'Super Frank' ingoma kubalandeli baseCentral. Le nto yenzeke umhla wabo we-Champions League. Bobabini abahlobo bachanekile. Jonga Ngezantsi;
I-Didier Drogba Ibali leNtshukumo yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts-Ulwalamano no-Roman Abramovich
U-Didier Drobga unalo ubudlelwane obuqinileyo kunye no-Roman Abrahimovic (umninimzi wase-Chelsea FC).
Yi le Lifebogger Inkcazo yokuthandwa nguDidier Drogba.
I-Index yeDidier Drogba UkuLungiswa nguBomiBogger
Nangona ixesha lakhe e-Chelsea libone ukuphela kwalo, iinkumbulo zeenjongo zakhe ziya kuhlala ngonaphakade.
I-Chelsea FC Ex-Players
I-Serge Aurier Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
U-Eric Bailly Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-Salomon Kalou Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
U-Emmanuel Eboue Ibali leNtsana ye-Child Plus I-Untold Biography Facts
I-Wilfried Zaha Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-Cheick Tiote Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
Ibali le-Yaya Toure yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts
Fonkem primus Antepioh Ngamana i-9, i-2017 kwi-9: 13 pm
Ngummangaliso, ndiyichukumise gqitha. Ndihlala ndimthanda le ndoda kwaye ndiya kuqhubeka ndiyenza ngokukodwa ngokuphathelele kwiminikelo yakhe ekupheliseni imfazwe yombutho eya kubangela ukuba imiphefumlo ibe yintshaba. Ngamana uThixo unokuqhubeka emkhokela.
NgeCawa Ikize Ajia NgoJulayi 9, 2020 Kwi10: 54 am
Drogba engummangaliso! Kodwa kutheni elahle zonke iindebe awaziphumeleleyo? Kuphela yintshatsheli yeligi.